Nala soo hadal
Mesh silig siligga solayga
Mesh mesh wareega la tuuri karo
La tuuro mesh grill mesh
Laydh la tuuro mesh mesh
Dhuxusha dhuxusha mesh
Mesh Mashiinka Hilibka lagu dubto
Kuleylka hilibka dubista ee Korea
BBQ dukaamada mesh grill
Mesh grill mesh
Dibedda mesh mesh mesh
Ahama mesh grillish mesh
Dukaanka hilibka lagu dubo ee duugga ah
Dhuxusha Shiil Mesh
Laydh la tuuri karo solay ...
Wareeg mesh silig wareegsan
Mesh la geyn karo oo la tuuro ayaa sidoo kale loo yaqaan mesh mesh grish mesh daboolan, kaas oo ka hortagi kara dhacdooyinka xagashada gacmaha.
Waxaan ku takhasusay Barbecue grill net soo saarista iyo dhoofinta illaa sanadkii 2005. Wax soo saar maalinle ah waa 300,000 oo gogo '. Shirkadayadu waxay kamid ahayd shirkadaha wax soosaarka BBQ mesh ee degmada Anping, halkaas oo ay ku taal magaalada mesh siliggu.
Iyada oo laga faa'iideysanayo keydinta kharashka shaqada si loo dhaqo iyo qiimaha wax soo saarka oo hooseeya, Shabakadda la shiilo ee la tuuro ayaa si weyn loo soo dhoweeyey dukaan hilibka lagu dubto. Warshadeenu waxay ku takhasustay soosaarida mesh warshad solay dhoofinta iyo dhoofinta in ka badan 15 sano. Wax soo saarka 'tayada' iyo waqtiga kadib adeegga dhammaantood dhammaantood sumcad sare ayey ku dhex leeyihiin suuqa. Faahfaahinta alaabada lagu taliyey: Wareega Wareega mesh-Nooca Wareegga Wareegga 0.85mm Mesh 11mm Cabbirka 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, 245mm, 250mm, 260mm, 263mm ...
Dhuxusha dhuxusha ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dukaamada hilibka lagu cuno, maqaayadaha, dalxiisyada iyo kaamamka bannaanka ee hilibka iyo kalluunka. Dhuxusha wanaagsan ayaa muhiim u ah ku raaxeysiga dhuxusha dhuxusha, taas oo sii ololi karta waqti dheerna dab xoog leh. Markaad dubayso, bedelida mesh kaaga, dabka dhuxusha gubanaaya ayaa qiiqaya hilibka dhadhan fiican. Cabirka caanka ah ee dhuxusha dhuxusha mesh la tuuro karo Mesh-Flat nooca Wire dhexroor 0.85mm Mesh 11mm Size 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, ...
Mesh grill mesh sidoo kale waxaa loola jeedaa mesh la tuuro mesh, kuwaas oo ka samaysan silig bir birta ah. Daboolid mesh wax lagu shiido oo cufan ayaa kahortagi kara dhacdooyinka xagashada gacmaha. Waxaa si weyn looga isticmaali jiray dukaamada hilibka lagu dubto ee Japan iyo Kuuriya, kuwaas oo badbaadin kara foosha dhaqida iyo dhaqaalaha beddelka. Mesh giriilku wuxuu ku haysan karaa cuntadaada dabka oo uusan hoos u dhicin wuxuuna u oggolaanayaa cunto si siman loo dubay waqti kasta. Dhuxusha dhuxusha ayaa ka dhigaysa hilibka carafta Dhuxusha. Geedi socodka wax soo saarka: Talaabada koowaad: Fiilo ...
Wareega la tuuro ee makiinada la shiilo ee loo yaqaan 'BBQ mesh mesh' ayaa sidoo kale loo yaqaan mesh grish mesh mesh, kaas oo ka hortagi kara dhacdooyinka xagashada gacmaha.
Waxaan ku takhasusay Barbecue grill net soo saarista iyo dhoofinta illaa sanadkii 2005. Wax soo saar maalinle ah waa 300,000 oo gogo '. Shirkadayadu waxay kamid ahayd shirkadaha ugu caansan ee ka ganacsada miiqyada BBQ ee degmada Anping, halkaas oo ay ku taal magaalada mesh siliggu.
Meshkeena grilishka mesh waxaa sidoo kale looyaqaan mesh gill la tuuri karo. Mesh la geyn karo oo la tuuro ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa BBQ dhuxusha, sida hilibka lagu dubto Japanese Hibachi, Foornada dhuxusha ee BBQ. Mesh siligga la tuuro ee la tuuro waxay la jirtaa dabeecadda qiimo jaban, uma baahna in la dhaqo, keydinta foosha, miisaanka fudud oo si fudud loogu qaado. Cabbirka caanka ah waxaa lagula talinayaa: Wareega Wareega mesh-Flat Nooca Dhex Dheer 0.85mm Mesh 11mm, 12mm Cabbirka 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, 245mm, 250mm, 260mm, 26 ...
Mesh grill mesh waxaa laga sameeyay silig bir bir ah oo galvanized ah, kuwaas oo loo yaqaan mesh silig miiro la tuuro iyo mesh mesh mesh bir ah, oo lagu celin karo in la isticmaalo. Mesh la tuuro oo la tuuro ayaa ka raqiisan mesh birta birta ah iyo badbaadinta foosha ee maydhashada. Cabbirka caanka ah sida hoos ku xusan: Mesh mesh silig wareega wareega ah - Nooca loo yaqaan 'Convex' dhexroor silig 0.8mm, 0.85mm Mesh 11mm, 11.5mm Cabbirka 330mm, 300mm, 295mm, 280mm, 270mm, 260mm, 245mm, 240mm, 230mm Wareeg silig wareegsan mesh- ARC nooca Dhexroor silig 0.85m ...
dibadda mesh grill mesh
The mesh grilling mesh mesh waa kuwo waara oo ku celceliya in la isticmaalo. Waxyaabaha silig galvanized steel, ahama ahama 304 fasal wanaagsan. (ma daxalaysto, way fududahay in la nadiifiyo) Xajmiga 430 * 340mm, 400 * 250mm, 560 * 410mm, 395 * 240mm (aqbal u yeelista) Dhexroor silig ah 1.0mm, 2.5mm, 3.0mm dhexroor Frame 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm Samee dab dhuxul ah oo ku rid foornada. Mesh mesh foornada ayaa ka dhigi doonta cunto si siman dubid. Hadda waxaan haysannaa mid ka mid ah mashiinnada wax soo saarka ugu horumarsan, khibrad ...
CINWAANBariga Lin Zhang, Degmada Anping, Hengshui City, Gobolka Hebei, Shiinaha